IMIHLA YOKUHLAZIYA INDLU ENEAUSPICIOUS NGOJUNI 2020 - PAMPEREDPEOPLENY.COM - YOGA-YOKOMOYA
NgoJuni 2020: Imihla yokuHlaziya indlu ngeNyanga kule Nyanga
Ekhaya Yokomoya yeYoga Inkolelo eyimfihlakalo Ukholo Mysticism oi-Prerna Aditi Ngu Prerna aditi ngoMeyi 29, 2020
Ukufudumeza indlu, okwaziwa ngokuba yi-Griha Pravesh, kuthathwa njengenye yezona zithethe zibalulekileyo xa umntu ethenga indlu entsha. Iyenziwa nje ukuba umntu athathe isigqibo sokungena kwindlu yakhe entsha. Abantu bakholelwa ukuba ukufudumala kwendlu kungazisa ithamsanqa kunye nethamsanqa kubomi babo kwaye ke, banika ukubaluleka kwayo. Abantu bahlala bezama ukukhetha umhla obalaseleyo wokwenza amasiko okushushubeza endlwini yabo entsha.
Ke, ukuba ujonge phambili ekucwangciseni umsebenzi wokufudumeza indlu endaweni yakho, silapha ukukuxelela ukuba ngaba kukho umhla wokufudumeza indlu onokuthi uwe ngoJuni 2020.
Funda kwakhona: NgoJuni 2020: Uluhlu lweMithendeleko eyaziwayo eya kubhiyozelwa kule Nyanga
Zibalwa njani iintsuku zokufudumala kwendlu
Imihla yokufudumeza indlu ibalwa emva kokugqitywa kwenkqubo ebizwa ngokuba yiPanchang Shuddhi okanye iPanchangam Suddhi. Yinkqubo enceda ekubaleni ixesha elinomdla kunye nemihla yokwenza i-puja yokufudumeza indlu endaweni kabani. Inkqubo ikwabandakanya ukufumanisa ukuba yeyiphi i-Nakshatra, i-Lagna, i-Yoga kunye ne-Karana eya kwenza ukuba umhla ube ulungele ngakumbi ukwenza amasiko ayimfuneko kwi-puja yokufudumeza indlu.
Abantu benza le puja ngoncedo lomfundisi kwaye bamema amalungu osapho abo, abahlobo kunye nezihlobo ukwenza umcimbi ungalibaleki kwaye wonwabe. Bakwaququzelela umthendeleko kwaye baqinisekise ukuba abo babathandayo bafika bezokuthatha inxaxheba kufudumalo lwendlu.
NgoJuni kukho usuku olunye kuphela oluqinisekileyo lokufudumeza indlu. Ngomhla we-15 kweyeSilimela ngowama-2020. Ke ngoko abo banqwenela ukubamba umsitho wokufudumeza izindlu bangawuthathela ingqalelo lo mhla. I-Nakshatra ngalo mhla iya kuba yi-Revati eyenza ukuba lo mhla ube mhle kakhulu kwaye ufaneleke. I-Tithi ngalo mhla iya kuba yiDashami, ngelixa iMuhurta ngalo mhla izakuqala nge-05: 23 kusasa kwaye iya kuhlala kude kube ngu-03: 18 nge-16 kaJuni ka-2020.
Ke, ukuba ucwangcisa ukubamba umsitho wokufudumeza indlu kwindawo yakho entsha, oko kunokuba lusuku olufanelekileyo kuwe.
ivuthiwe ipapaya ilungele abantu abaneswekile
njani ukufumana ubuso enobulungisa nangoko
Yintoni ebangela iinwele ezimhlophe zisencinci
uyifumana phi igigolo e-delhi
indlela yokufumana i-eyelashes eninzi ngokwemvelo
ubhaka njani ikhekhe kwisipheki
Ucoceka njani izinto zobhedu ekhaya